Ukulondolozwa kwama-video - isisekelo se-afrikhepri
Welcome IMIKHAKHA IMIQOPHI
Imibhalo kanye nezingxoxo ezenziwa nguTistrya (Amavidiyo)
UNassim Haramein ulandisa ngohambo lwakhe olwamholela ekubeni abe nentshisekelo kubunjalo beqiniso nokusebenza kwendawo yonke. https://www.youtube.com/watch?v=qN1ZaFtIBuI&list=UUhcIFyud8lRlBqJtjBQKuFA&index=8
Umlando Jikelele we-Afrika (Amavidiyo)
Kungani sikhuluma nge-Afrika yomhlaba wonke namhlanje hhayi nge-Afrika egcwele umhlaba? Ngoba ama-Afrika akhombisile amandla angajwayelekile wesiko lokuwela, ngamanye amagama ukugcina amasiko awo, ...
Ngesinye isikhathi eMesopotamia - I-Documentary (1998)
ESiriya nase-Iraq, phakathi kweTigrisi ne-Ewufrathe, izwe lokuthula. Akukho okukumema ukuthi useshe, umbe. Akukho lutho ngaphandle kwezitini eziyinqaba eziqoshwe ngezimpawu ezingaqondakali ezimile ...
Indlela yokwenza ama-donuts ase-Afrika?
Indlela yokwenza ama-donuts ase-Afrika? nalu uchungechunge lwamavidiyo azothanda ukulungiselela ama-donuts ase-Afrika.
Yeka ukuthi umhlaba ushibhile kanjani - uRaj Patel (Ividiyo)
URaj Patel ungusomnotho, umbhali, umcwaningi futhi uyisishoshovu sezepolitiki. Uchwepheshe enkingeni yokudla, ubambe iqhaza ekusabalaliseni ifilosofi yokwabelana.
Izimfundiso zeKrishnamurti (Uhlu lwadlalwayo)
UJiddu Krishnamurti ungumdabuka waseNdiya ogqugquzela enye imfundo.
Masibuyele emasikweni ethu, emasikweni ethu, kumafilosofi ethu, ezindleleni zethu zokuphila, ezinhlelweni zethu zepolitiki, nakwezomnotho. Kalula nje, masibe yithi futhi, ngaphambi kokuba kwephuze kakhulu.
Izwi le-Francophone Africa (Ividiyo)
Umbukiso ubona abakhethiweyo abaningi beqaqa labo abaqala uhambo lwabo ngama-auditions angaboni ukuze bakhethe umqeqeshi ozobasiza ukuthi banqobe isizini. https://www.youtube.com/watch?list=PLPPr_sjKyrplh_rtKDfb2yrow9w13usDf&v=Ql60GJaqt3k&feature=emb_title
I-Hypnosis, Ukuzikhohlisa, Ukuphumula Okuqondisiwe (Ividiyo)
Finyelela izinhloso zakho kalula ngalesi sikhathi se-hypnosis. Zivumele uqondiswe ngokulalela le ngcweti yomchwepheshe. Isinyathelo sokuqala empumelelweni ukwenza izinguquko engqondweni yakho.
Ngakolunye uhlangothi, ishaneli semfundo yokwazi nokufunda umlando wobuntu
Kuyindlela yezemfundo yokwazi nokuqonda umlando wesintu ngombono omusha. Yisiteshi esikuvumela ukuthi ucebise umbono wakho we-World and of Life sibonga ...
Iphiramidi enkulu i-K2019 - Idokhumentari (2019)
Izici eziningi, ezifaneleke njenge- "imininingwane" zishiywe ngamabomu ngabachwepheshe bayo yonke imivimbo. Kodwa-ke empeleni yimininingwane ebuza noma yimuphi ...
Ukuthuthuka Komuntu (Umsindo)
Ukuzithuthukisa kuyisethi yemikhuba ehlukanisayo, engemigqa ehlukahlukene yokucabanga, ehlose ukuthuthukisa ukuzazi, ukuthuthukisa amakhono ...
Umhlaba Wangaphakathi (Ividiyo)
Kunensimu yokudlidliza ehlanganisa zonke izinto Sayibiza ngokuthi yi-Akasha, umsindo wokuqala u-Om, iparele lomgexo we-Indra, ukuvumelana kwezikhala nezinkulungwane zamagama amanye ...